ပြင်သစ်တွင်, ကြိယာobéir "နာခံရန်" ကိုဆိုလိုတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ရှိသော counterpart ရန်အလွန်ဆင်တူသည် désobéir (စကားနားမထောင်) နှင့်နှစ်ဦးကိုအတူတူကြိယာ conjugation လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာသင်ယူဖို့တစ်ဦးချင်းစီအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ငါတို့သည်ဤသင်ခန်းစာတွင်obéirလေ့လာဖို့နှင့်၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံး conjugation ရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့။
ပြင်သစ်ကြိယာ conjugation ပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေ "နာခံနေပါတယ်" နှင့်အတိတ်တင်းမာနေကဲ့သို့သောအရာများသို့ကြိယာအသွင်ပြောင်းဖို့လိုအပ်သည် "စကားကိုနားထောငျ။ " သူတို့ကိုဖွဲ့စည်းရန်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအင်္ဂလိပ်လုပ်ပေးအများကြီးသကဲ့သို့, ကြိယာကို stem မှနောက်ဆုံးတွင်အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
ပြင်သစ်နှင့်အတူဖမ်းတစ်ဦးချင်းစီတင်းမာနေအတွင်းရှိသမျှသောဘာသာရပ်နာမ်စားဘို့အသစ်တစ်ခုဇာတ်သိမ်းရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သင်တို့ကိုမှတ်မိဖို့ကပိုစကားများကြဆိုလိုတာနေစဉ်, သင်လေ့လာတစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုကြိယာနှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာပါဘူး။ Obéirတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ir ကြိယာ - ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကိုလည်းအလွတ်ကျက်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်နိုင်အောင်, ပိုဘုံပုံစံများတစ်ခုဖြစ်သည်သော။
စတင်ကျနော်တို့ပြကြိယာစိတ်နှင့်အခြေခံပစ္စုပ္ပန်, အနာဂတ်နှင့်မစုံလငျအတိတ်တင်းမာနေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသုံးစွဲဖို့အဆုံးသတ်ထားတဲ့သင်ယူဖို့ဇယား၌သင်တို့ကိုဘာသာရပ်များအတွက်သင့်လျော်သောတင်းမာနေဖို့ဘာသာရပ်နာမ်စားကိုက်ညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, "ငါတို့စကားကိုနားထောငျပါမညျ" နေချိန်မှာj'obéisဖြစ်ပါတယ် "ကျွန်မနာခံနေပါတယ်" nous obéironsဖြစ်ပါတယ်။
နာခံ obéirai obéissais
နာခံ obéiras obéissais
အများဆုံးနှင့်ဝသကဲ့သို့ - ထိုဖွဲ့စည်းရန်obéirမှ ssant - ir ကြိယာ, သင်ပေါင်းထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် အများကိန်း ။
အတိတ်ကာလကတင်းမာနေသည်, သင်မစုံလငျပါသို့မဟုတ်အကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည် Pass တေးရေးဆရာ ပွငျသစျထဲတွင်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုသောဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏တဦးတည်းသော။ obéirထိုသို့ဖွဲ့စည်းရန်, သင်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် အရန်ကြိယာ avoir နှင့် အတိတ် participle နာခံ။
ဥပမာ, "ငါစကားကိုနား ထောင်. " nous Avon ဝင်. အစေခံ၏ "ကျနော်တို့စကားကိုနားထောငျ" j'ai ဝင်. အစေခံသည်နှင့်။
သင်သာ conjugate ဖို့လိုအပ်ပုံကိုသတိထားမိ avoir အတိတ် participle အမြဲအတူတူပင်ဖြစ်နေဆဲသောဘာသာရပ်ကိုက်ညီဖို့ပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေနှင့်။
တစ်ခါတလေသင်သည်လည်းအသုံးဝင်သောအနည်းငယ်သည်အခြားရိုးရှင်းသော conjugation ရှာတွေ့လိမ့်မည်။ ဥပမာ, ပု subjunctive သငျသညျကိုနာခံ၏အရေးယူမှုတချို့မသေချာမရေရာဆိုလိုဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အလားတူပင် အဆိုပါခြွင်းချက် အခြားအရာတစ်ခုခုအရင်ဖြစ်ရမည်ရှိရာတစ်ဦး "ပါလျှင် ... ထို့နောက်" အခွအေနေအဘို့အအသုံးဝင်သည်။ သင်တို့ကိုလည်းကြုံတွေ့ရသို့မဟုတ်အသုံးပြုနိုင်သည်ပါမယ်အချိန်များရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည် အဆိုပါ Pass ရိုးရှင်းတဲ့ သို့မဟုတ် မစုံလငျ subjunctive ။
obéisse obéirais နာခံ obéisse
obéisses obéirais နာခံ obéisses
obéirကဲ့သို့ကြိယာများအတွက်, ပုရအရေးကြီးသော သငျသညျအမိန့်တော်ရှိချင်သို့မဟုတ်အခိုငျအမာတစ်စုံတစ်ဦးကတောင်းဆိုအထူးသဖြင့်အခါ, အတော်လေးအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ် "နာခံ!" သငျသညျကရိုးရှင်းနိုင်အောင်အဆိုပါဘာသာရပ်နာမ်စား, မလိုအပ်ပါ "နာခံ!"
(Stay) ကိုပြင်သစ်ကြိယာ "Rester" Conjugate လုပ်နည်း
ပြင်သစ်တွင် "သာလျှင်" / "ကိုသာ" ဟုအဆိုပါကန့်သတ်
'' Unos '' vs. '' Algunos ''
တွေ့ဆုံကောငျးကငျတ Chamuel, ငြိမ်းချမ်းစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏အိန်ဂျယ်
ကောလိပ်ဒီဂရီနီးပါး Doubles နှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေ
ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် permutation အကြားခြားနားချက်
သတင်းစာပညာကျောင်းသားများကစပြီး 15 အကူအညီဖြစ်တဲ့သတင်းရေးသားခြင်းစည်းကမ်းများ
အမြစ်နှင့် Butt ပုပ်ပင်ရောဂါ - ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း
Periodic Trend အဓိပ္ပာယ်
Handel ၏မရှေိယ - HWV 56 (1741)
ကယ်လီဖိုးနီးယား, အပေါ့ပေါ့ပါးပါးကို Traveller များအတွက်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်အတွက်ဗိသုကာပညာ
အပြောအဆို, ဒါမှမဟုတ်ဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့၏အနုပညာတွင်, Francis Bacon အားဖြင့်
အဘယ်အရာကို X-ထဲက '' ဂေါက်သီးဘောလုံးရှိပါသလားနှင့်သူတို့စည်းကမ်းများအောက်မှာ '' ဥပဒေရေးရာ '' ရှိသနည်း
ဓာတုဗေဒအတွက်မူလတန်းနျ Standard ဆိုတာဘာလဲ